प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा १ बजे राष्ट्रिय योजना आयोग बैठक - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज दिउँसो १ बजेलाई बैठक डाकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी सकेर बजेट भाषणसमेत मुद्रण विभागमा छाप्न पठाएसँगै योजना आयोगले बैठक डाकेको हो ।
दिउँसो १ बजे योजना आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानामन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा डाकिएको बैठकमा योजना आयोगका सबै सदस्यका साथै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी पनि रहनेछन् ।
प्रदेश मुख्यमन्त्री, सबै मन्त्रीहरू योजना आयोगका पदेन सदस्य रहन्छन् । पूर्ण बैठकमा मुख्यमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रीहरूलाई बोलाउने गरिए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे जानकारी लिनका लागि बिहीबार बैठक डाकिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दिउँसो ४ बजे आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । त्यसअघि योजना आयोग, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र मन्त्रिपरिषद्लाई अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटबारे जानकारी गराउनेछन् ।